Seeraar: Axmed Madoobe inuu dadka isu laayo ayuu doonayaa, anaga ma rabno dagaalkaas inuu sii socdo | Dhacdo.com
Home Wararka Maanta Seeraar: Axmed Madoobe inuu dadka isu laayo ayuu doonayaa, anaga ma rabno...
Seeraar: Axmed Madoobe inuu dadka isu laayo ayuu doonayaa, anaga ma rabno dagaalkaas inuu sii socdo
Cabdinaasir Seeraar Maax oo horey u sheegtay inuu yahay Madaxweynaha Jubbaland ayaa ka hadlay iska horimaadkii maanta ka dhacay Magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubbada Hoose.
Cabdinaasir Seeraar Maax, Afhayeenkii hore ee Maamulka Jubbaland ayaa ku doodaya in lagu soo weeraray hoyga uu ka degan yahay Xarunta Gobolka Jubbada Hoose ee Magaalada Kismaayo.
“Maanta waxaa dhacay rabshad, rabshadaasuna waxaa weeye mid anaga nalagu sameeyay oo nalagu bilaabay, waad ogeyd meeshaan si nabadgelyo ah baa lagu joogay. Dad shacab ah oo isu deyaayay inay dareenkooda muujiyaan oo nooc mudaaharaad ay sameeyaan ayay ahayd, xilli bandow ah. Xaafadii aan anigu ka deganaa magaaladaa la’igu soo weeraray oo dagaal la’igu sameeyay. Waxaa i soo weeraray waa Axmed Madoobe ciidankiisii.” Ayuu yiri Cabdinaasir Seeraar Maax.
Isagoo la hadlayay BBC ayuu yiri “Weerarkan muddaba wuu iska socday, ninkani waxaa weeye hawshan beryahaanba wuu waday, anaguna waan ogayn. Dulqaadkaa iga dhammaaday nimankan magaalada waan ka saarayaa, sheekooyinkan beryahaan oo dhanba wuu waday, wuu maqnaa, wuuna yimid. Habeen horuu isugu yeeray Saraakiisha ciidankiisa wuxuu yiri nimankan magaalada joogga waa in laga bixiyaa.”
Su’aal ahayd sida uu dagaalku ku bilowday ayaa wuxuu ku jawaabay “Dagaalku wuxuu ku bilowday daan-daansi baa nalagu sameeyay. Anaga xaafadaha aan deganahay oo amnigoodu uu fiicnaa, dadka waad ogtahayoo dhaqdhaqaaq baa jira, ciidan baa nagu soo dhawaadoo anaga xabado nagu furay.”
Ka dib maxaa dhacay oo la weydiiyay ayuu yiri “Wixii dhalinyarada markaa hayeen xabado waala riday, dee meesha ciidan baa joogay, nin qori wato ninka kale wuu ku ridayaa.”
Cabdinaasir Seeraar ayaa ku andacoonaya inay iyagu doonayan doorasho ka dhacdo Jubbaland, isla-markaana ay ku taagan yihiin wadada ah sidii doorasho loo qaban lahaa, hase ahaatee waxaa uu Axmed Madoobe ku eedeeyay inuu abaabulayo dagaal, uu ujeedkiisu yahay in doorashada lagu fashiliyo.
“Doorasho halkaan kama dhicin doorashadaa rabnay inaan ka shaqayno oo ay dhacdo, tii baana anagu ku taaganahay. Axmed Madoobe wuxuu ka shaqaynayaa oo qabiil uu u abaabulayaa inuu dadka isu laayo oo barnaamijkan uu ka hortaggo.” Ayuu yiri Cabdinaasir Seeraar.
Waxa uu intaa ku daray “Anaga hadda nin noo dowladeen karo ma jiro, axsaanka iyo wanaagga haddii uu wax tari waayo, anagu qaabka kale ee loo tacaamulo waan naqaanaa.”
Mar uu ka hadlayay sida uu iska horimaadku ku joogsaday ayuu ku jawaabay “Xabadii hadda waa joogsatay, anaguna inay joogsato waan ka shaqaynay, koley dad ku dhex jiro oo odayaala waa jiraan, xabadda iyo dagaalkaas inuu sii socdo ma rabno oo khasaaruhu bato ma doonayno.”
Isagoo ka jawaabaya khasaaraha ka dhashay iska horimaadkaasi ayuu yiri “Weli ma qiimayn karno khasaaraha iyo qaabkey wax u dhaceen, ma qiimayn karayo hadda.”
Iska horimaadkan ka dhacay Magaalada Kismaayo oo u dhaxeeyay Ciidamada Jubbaland iyo maleeshiyaad u daacad ah Seeraar ayaa ka dhacay xaafadda Farjano, mana jirin qaybo ka mid ah magaalada oo uu ku sii fiday.